Gogoldhiga Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee La Sugi La’ Yahay Ee Arsenal v Chelsea. - jornalizem
Gogoldhiga Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee La Sugi La’ Yahay Ee Arsenal v Chelsea.
Chelsea oo hogaanka Premier League ku heysa 13 dhibcood ka dib shan kulan oo la ciyaaray ayaa maanta booqan doonta kooxda Arsenal oo leh 9 dhibcood balse weli aysan wax guuldarro ah soo gaarin shantii kulan ee ay ciyaareen, labada kooxood ayaana ah labada kooxood ee kaliya farqiga goolasha uu u yahay 7 gool.
Kulanka Arsenal v Chelsea
Waqtiga: 2:45 p.m duhurnimo ee xilliga Soomaaliya.
LINE-UPKA MACQUULKA AHARSENAL
Theo Walcott, oo labo gool ka dhaliyay kooxda Conventry kulankii League Cup ayay u badan tahay inuu ku soo bilaaban doono kulankaan, madama Gervinho uu fursado badan kooxda ka qasaariyay kulankii Manchester City. Olivier Giroud, oo goolkiisii ugu horeeyay u dhaliyay Arsenal habeenkii arbacada ayaa bedeli doona ciyaaryahanka reer Ivory Coast iyadoo Walcott uu ka ciyaari doono garab weerar.
Thomas Vermaelen oo xum la maqnaa ayaa haatan soo laabtay, waxaana laga yaabaa inuu ku qasbo Per Mertesacker inuu kursiga keydka fariisto, iyadoo xiddiga reer Belgium la filayo inuu ka garab ciyaaro Laurent Koscielny. Ciyaaryahanada mudada dheer maqan Jack Wilshere, Bacary Sagna, Tomas Rosicky iyo Wojciech Szczesny ayaa maqnaan doona ilaa iyo bisha soo socota.
Frank Lampard iyo Daniel Sturridge ayaa la filayaa inay ka soo kabsadaan dhaawacyadii ay qabeen ka hor kulanka ay maanta booqanayaan Emirates Stadium, iyadoo Lampard la filayo inuu ku soo bilowdo.
Ganaaxii dhawaan lagu soo rogay John Terry ee afarta kulan ayaan dhaqan geli doonin ilaa iyo inta nidaamka racfaanka uu ka soo gabagaboobayo, sidaasi darteed kabtanka Blues waxa uu qeyb ka noqon doonaa line-upka sida caadiga ah, iyadoo Roberto Di Matteo uu heysto koox buuxda oo uu ka soo xusho line-upkiisa.
Guul ay ka gaaraan Chelsea waxa ay ka dhigeysaa in Wenger uu gaaro guushiisii 350aad ee Premier League intii uu macalin u ahaa Arsenal.
Marka loo barbardhigo xilli ciyaareedkii hore xilligan oo kale halka ay Arsenal joogtay, Arsenal waxa ay sareysaa 10 boos, waxa ay leedahay in ka badan shan dhibcood, iyo farqiga goolasha oo ay 15 jeer ka fiican tahay.
Vito Mannone (91%) ayaa leh in ka badan shuudadkii la badbaadiyay marka loo barbardhigo Petr Cech (88%).
Mikel Arteta oo safan doona kulankiisii 250aad ee kuabada cagta England, ayaa celcelis ahaan 111 jeer taabtay kubada kulan kasta xilli ciyaareedkan, waana in ka badan ciyaaryahan kale oo ka ciyaaraya Premier League.
Chelsea ayaan gool laga dhalin Premier League muddo ka badan bil, iyadoo xiddiga Reading Danny Guthrie uu yahay ninkii ugu danbeeyay ee daafacooda mara.
Blues ayaan gool laga dhalinin 331 daqiiqo oo ay ciyaareen, iyadoo goolka Danny Guthrie ee bishii August uu ahaa kii ugu danbeeyay.
John Terry ayaa hal gool u jira goolkiisii 50aad ee Chelsea.
Branislav Ivanovic ayaa safan doona kulankiisii 100aad ee uu ku soo bilowdo Blues.
Waxaan shalayto weydiinay akhristaasheena inay sadaal ka bixiyaan kulankaan xiisaha iyo xamaasada leh ee London Derby, waxaana codbixintii aan idiin soo bandhignay ka qeyb qaatay 2,272 akhriste.
Akhristayaasha Laacib.net ayaa sadaaliyay in Arsenal ay badin doonto kulanka maanta ka dhacaya Emirates iyadoo 56 boqolkiiba ay sidaasi sadaal ku bixiyeen.
38 boqolkiiba ayaa sadaaliyay in Chelsea ay badin doonto, halka 6 boqolkiiba ay sadaaliyeen in barbaro ay ciyaarta ku dhamaan doonto.